Interlock Hose အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း - တရုတ်စက်ရုံ - Cixi Wenap အင်တာနေရှင်နယ်ထရေးဒင်း Co. , Ltd မှ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဟိုက်ဒရောလစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်း > ဟိုက်ဒရောလစ် Hose Fittings > Interlock Hose အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်
အဆိုပါ Interlock Hose အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်၏ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်
လျောက်ပတ် Interlock ဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက်: 1 ။ 45 # ကာဗွန်သံမဏိဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ 2.Yellow သို့မဟုတ်အဖြူဇင့်ချထားတဲ့။ 3.Scope: အပြည့်အဝအရွယ်အစား။ 4.Ensure အားလုံးထုတ်ကုန်တင်ပို့မတိုင်မီ 100% inspectioin ဖြစ်ကြသည်။ 5. Prompt ကိုဖြန့်ဝေ။ 6. ဖောက်သည်-orientated ဒီဇိုင်း။ burrs နှင့် impurites မပါဘဲ 7. ပြီးပြည့်စုံသောမျက်နှာပြင်ချောမွေ့။ 8. အမျိုးမျိုးအမျိုးအစားများကိုအမျိုးမျိုးသောဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက်သက်ဆိုင်ပါသည်။ 9. အခမဲ့နမူနာခွင့်ပြုချက်အဘို့အနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Interlock Hose အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်၏ကုန်ပစ္စည်း Parameter
1/2 & quote; -2 & quote;
JIC, SAE, Din, BSP, JIS ဘီ andISO ။
အဝါရောင် / White,
-40Âဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ~~ + 120Âဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
0 င် ~ 35Mpa
အဝါရောင်သို့မဟုတ် White သွပ်ပန်းကန်
အဆိုပါ Interlock Hose အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်၏ကုန်ပစ္စည်း Feature ကိုများနှင့်လျှောက်လွှာ
45 # ကာဗွန်သံမဏိလုပ် 1. ။
အဆိုပါ Interlock Hose အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်၏ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
hot Tags:: တရုတ်ခုနှစ်တွင်ဖန်ဆင်း Interlock Hose အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, လက်ကား, ဝယ်, ဖောက်သည်စတော့အိတ်များတွင်အစုလိုက်, စျေး, Pricelist, စျေးနှုန်း, High Quality